သင်၏လုပ်ငန်းတွင်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန် GNU / Linux ဖြန့်ချိမှု 2019 | Linux မှ
သင်၏လုပ်ငန်းတွင်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းရန် GNU / Linux ဖြန့်ချိမှု ၂၀၁၉၉
ဖြစ်ရပ်အမျိုးမျိုးတွင်အချို့သောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုအချို့သောဖြန့်ဝေမှုများသို့မဟုတ်နှစ်စဉ်အကောင်းဆုံးဖြန့်ဝေမှုများစာရင်းတွင်ဖော်ပြသည်။ သို့သော်ယခုတစ်ကြိမ်တွင်အချို့စာရင်းများနှင့်စာရင်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြလိုကြသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်အကိုင်များအတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးအစားဖြန့်ဝေ။ သင်အလိုအလျောက်ထုတ်ပေးသောဖြန့်ဖြူးမှုများသည်အမှန်တကယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းရန်လိုအပ်ချက်များကိုပြည့်စုံစွာဖြည့်ဆည်းရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အလုပ်များသို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းခြင်းထက်အခြားအရာများကိုလုပ်ဆောင်ရန်အချိန်မဖြုန်းပါ။
ရန်အဖြစ် အမျိုးအစား ကျွန်တော်တို့ပါဝင်တော့မယ်ဆိုတာသိသာထင်ရှားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာတည်ရှိပြီးတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်လူကြိုက်အများဆုံးအချို့ကတော့အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီအတွက်ဖြန့်ဖြူးမှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြသကြတာပါ။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကလူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာပါ။ ဆိုလိုတာကအသုံးပြုသူတော်တော်များများဟာရွေးချယ်မှုတွေကိုသဘောမတူကြဘူးဒါမှမဟုတ်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကပိုကောင်းတယ်လို့မထင်ဘူး။ သူတို့လိုချင်တာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စဉ်းစားလို့ရတယ်။
တကယ်တော့သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုအကောင်းဆုံးဖြန့်ဝေမှုကဘာလဲဆိုတာမေးတဲ့အခါငါလည်းအတူတူပဲဖြေတယ်။သင်အနှစ်သက်ဆုံးနှင့်သင်နှင့်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်သည်«။ သငျသညျ Arch နှင့်အတူအဆင်ပြေခံစားရစေခြင်းငှါအသုံးပြုရ, ထိုသို့အလွယ်ကူဆုံးထင်ကြပေမည်။ ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲ? သုံးစွဲသူများစွာသည်စဉ်း စား၍ မရသော်လည်းမည်သည့်ဝန်းကျင်တွင်မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပိုမိုကျွမ်းကျင်စွာသင်ထားသင့်သည်ကိုအမြဲစဉ်းစားသင့်သည်။ မည်သည့် tool ကိုအတူတူပင်တတ်၏။ ဥပမာအားဖြင့်စာသားတည်းဖြတ်သူများ - vim, vi, emacs, nano, gedit, …ဘာထူးခြားသနည်း။ အကောင်းဆုံးတစ်ခုကတော့သင်နှင့်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်သည်။
သို့သော်ထိုသူတို့အဘို့ အသစ်များသောအသုံးပြုသူများ ဒီနေရာမှာသူတို့မှာအကြိုက်ဆုံးသို့မဟုတ်ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်မရှိသေးသောကြောင့်လမ်းညွှန်မှုလိုချင်ပေမည်။ သူတို့အတွက်ကောင်းပြီ၊
6 ပင်တဂွန် / Hacking:
ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီမှုများစွာရှိသည် ပညာရေးနှင့်၎င်းတို့သည်သင်တန်းကဏ္ importance ၏အရေးကြီးမှုကြောင့်အရေးအပါဆုံးသူများထဲမှဖြစ်နိုင်သည်။ ဤဖြန့်ဖြူးခြင်းအမျိုးအစားများသည်ကလေးငယ်များအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားသည့်ကြိုတင်တပ်ဆင်ထားသည့်ဆော့ဝဲလ်များပါ ၀ င်သော်လည်း၎င်းမှာသက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်သင်ကြားရေး ၀ န်ထမ်းများအတွက်လည်းဖြစ်သည်။
openSUSE လီ -FE ဒီပညာရေးတည်ဆောက်မှုကိုတည်ဆောက်ထားပြီးဖြစ်သော openSUSE ဖြန့်ဖြူးသည်။ ၎င်းတွင်စာသင်ခန်းများနှင့်ပညာရေးစင်တာများအတွက်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောဆော့ဝဲလ်များစွာရှိသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် KIWI-LTSP ဆာဗာတွင်၎င်းသည်နည်းပညာဆိုင်ရာအသိပညာမရှိဘဲတောင်အသုံးပြုနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
Edubuntu ၎င်းသည် Ubuntu အခြေစိုက် distro ကိုလူသိများသည်။ ၎င်းသည် Ubuntu ၏အကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးရှိသော်လည်း၊ ကျောင်းသားများနှင့်ဆရာများနှစ် ဦး စလုံးအတွက်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောပညာရေးအတွက်ဒီဇိုင်းထုပ်ပိုးထားသောပစ္စည်းများနှင့်အတူ။
တဖန်သင်တို့သိသည့်အတိုင်းအများကြီးပိုများသော်လည်း၊ ဤနှစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုအများဆုံးဖမ်းယူသူများဖြစ်သည်။ ကလေးငယ်များအတွက်ပိုမိုတိကျစွာသင်လိုချင်ပါကထိုကဲ့သို့သောစီမံကိန်းများကိုသင်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည် သကြားဓာတ်ခွဲခန်း o ဒူ.
သင်လိုချင်သောမည်သည့် server ကိုမဆိုတည်ဆောက်လိုပါကမတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ အငြင်းပွားဖွယ်မရှိသောမိဖုရားများမှာနှစ်ခုရှိသည်။ CentOS y debian။ သင်ရွေးချယ်နိုင်သော်လည်း RHEL သို့မဟုတ် SLES Red Hat မှ (ယခု IBM ကပိုင်ဆိုင်သည်) နှင့် SuSE တို့မှဖြစ်သည်။ CentOS ကိစ္စတွင်၎င်းသည် RHEL ကုဒ်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ရပ်ရွာကလုံးဝဖွင့ ်၍ အခမဲ့ဖြစ်သည်။ RPM package များကိုသင်ပိုနှစ်သက်လျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ DEB ကိုသင့်အပေါ်မှာပိုမိုထည့်သွင်းပါက Debian ပရောဂျက်ဟောင်းသို့သွားပါ။
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည် PopOS, Ubuntu ကို, Arch Linux ကို y Gentoo အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာအဖြစ်။ ဘာလို့လဲ ကောင်းပြီ၊ ပထမတစ်ခုကအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ကျော်ကြားလှသော System76 ကုမ္ပဏီမှမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောစီမံကိန်းသည်သင်၏အဖွဲ့ကိုသင်၏ကုမ္ပဏီ၏တိုးတက်မှုအကောင်းဆုံးကိရိယာအဖြစ်ရည်စူးလိုသည်။ ဒါပေမယ့်သိသာထင်ရှားတဲ့ Ubuntu ဟာဟဲဗီးဝိတ်ကြီးတွေထဲကတစ်ခုပါပဲ၊ သူသိတဲ့အရည်အသွေးတွေကြောင့်သာမကလူကြိုက်များတဲ့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်သင်လိုအပ်သော IDEs, packages များနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Gentoo နှင့် Arch Linux သည်အရိုးရှင်းဆုံးမဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်စူပါပတ်ဝန်းကျင်နှစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကို scratch မှတပ်ဆင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။
Multimedia အလုပ်နှင့်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းအတွက် Ubuntu သည်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင့်အားကူညီရန်သင်ရှာတွေ့မည့်ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ဒရိုင်ဘာနှင့်စာရွက်စာတမ်းများအတွက်ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်မည့်ယေဘုယျရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်သောလမ်းဘေးအဝေးမှအာရုံစိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် Fedora ဒီဇိုင်း Suite y Ubuntu ကိုစတူဒီယိုကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော Package များကိုဆောင်ခြင်းဖြင့်သင်လုပ်သမျှအားလုံးနီးပါးလုပ်လိမ့်မည်။ ArtistX သည်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအခြားရွေးချယ်စရာများစွာလည်းရှိသည်။
ငါစိတ်ထဲပေါ်လာသောပထမ ဦး ဆုံးတ ဦး တည်း Scientific Linux (ယခုယခုခန့်မှန်းသည်) CCentOS), ကျော်ကြားဥရောပ CERN distro ။ သို့သော်သိပ္ပံပညာအတွက်အခြားသူများရှိသော်လည်းရူပဗေဒပညာရှင်များအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အခြားရွေးချယ်စရာ Poseidon Linux။ အဲဒီအစား, ဇီဝဗေဒနှင့်ဘူမိဗေဒအဘို့, BIO-Linux ကို y OSGeo သူတို့နှစ်ခုအကြီးအရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ CAD နှင့်အလုပ်လုပ်နေသောအင်ဂျင်နီယာများအတွက်၊ CAELinux ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် ဤရွေ့ကားအခြားနည်းလမ်းအချို့, ဒါပေမယ့်တချို့အတန်ငယ်လျစ်လျူရှုသို့မဟုတ်စွန့်ပစ်ခဲ့ကြသောကြောင့်, သတိထားပါ။
ပင်တဂွန် / Hacking:
အကယ်၍ သင်သည်လုံခြုံရေးကိစ္စကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရည်ညွှန်းပါကသင်၏အကြိုက်ဆုံးမှာအနည်းဆုံးကျွန်ုပ်ဖြစ်သည် Kali Linux ကိုpentesting ၏, ဆွစ်စစ်တပ်ဓါး။ နောက်ထပ်အားကောင်းတဲ့နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတော့ Parrot OS။ သို့သော်အခြားကြီးမားသောနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောစီမံကိန်းများရှိသည်။ အထူးသဖြင့်သင်သည်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်စစ်ဆေးခြင်း၊ မှုခင်းကုသမှုစသည်တို့နှင့်ပိုမိုတိကျစွာလုပ်ဆောင်လျှင်။
အဲဒီလိုဆိုရင် Santoku မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းတွေအတွက်, ကာဣနနှင့် DEFT သူတို့သည်သင်၏အကြိုက်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ သင့်အနေဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်ဝက်ဘ်စစ်ဆေးမှုများကိုအထူးပြုလိုပါကကြည့်ရှုပါ ဆာမူရိုင်း။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် WiFi စစ်ဆေးမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုနှင့်စပိန်အရသာရှိသောစီမံကိန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ Wifislax.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » သင်၏လုပ်ငန်းတွင်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းရန် GNU / Linux ဖြန့်ချိမှု ၂၀၁၉၉
VirtualBox 6.0.2 ၏ဗားရှင်းသစ်သည်၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ထည့်သွင်းမှုများကိုသိရှိထားသည်
GitHub သည် GitHub Desktop 1.6 ဗားရှင်းအသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်